5 Wax Yaabo aad ku ogaan karto Saaxiib Kaaga Rumaad Iyo Saaxiib Beenaadka | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » 5 Wax Yaabo aad ku ogaan karto Saaxiib Kaaga Rumaad Iyo Saaxiib Beenaadka
5 Wax Yaabo aad ku ogaan karto Saaxiib Kaaga Rumaad Iyo Saaxiib Beenaadka
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 22-07-16 6:33 AM Haddaad doonayso inaad ogaato saaxiibka danta kugula jooga iyo guud ahaan saaxiibka beenta ah si aad naftaada uga ilaaliso ,waxaa jira Astaamo ka wada dhexeeya oo lagu garto. Waxaynu ku nool nahay maanta Adduun khiyaanada iyo wanjaliddu ay tahay mid iska caadi ah, waji kasta oo qoslayana wanaag uma qarsoona .
Saaxiibada beenta ahi meel kasta way ku badan yihiin, Dahabka Asalka ah iyo kan kale ee bugta ah si lagu kala saaraa way adag tahay , gaar ahaan qofka aan khibradda fiican u lahayn, waxaana la hubaa in markasta ay kuu dhawyihiin dad sheeganaya inay yihiin Saaxiibadaada rumaad laakiin ah saaxiib Daneed, oo marka uu dantiisa kaa gaadho meel cidlo ah kaaga dhaqaaqaya.
Waxaana jira waddooyin dhowr ah oo lagu garto inaad la joogto saaxiibkaaga rumaad iyo in kale:
Waa danayste oo Wax kasta isla raba; markastana waxa uu ku fakarayaa dantiisa oo kaliya marna arki maysid isagoo taada ka talinaya ama ku leh shaygani aduu kugu fiicnaan lahaa, waxa uu kusoo wacayaa oo uu kusoo baadi goobayaa marka uu kuu baahan yahay oo kaliya.
Markuu kula joogo Xantiisaa Badan; waxaa la yiraahdaa kuu sheekeeyaa kaa sheekeeya ee hala sheekaysan, marka uu qofi adiga kula xamanayo qof kale waxaa la hubaa inuu adigana kaa sheekeynayo, waana calaamad kale oo lagu garto saaxiibka xun.
Marka aad la joogto waxaad isleedahay yaa shakhsi kale kaa dhiga, markaad ka timaadana waad soo dhuumanaysaa si aan laguugu sawirin adigoo xishoonaya waliba.
Waxaad ku arkaysaa Been iyo Tartan; ma jeclay wax kasta oo Daacadnimo khuseeya , beenta un baa ka dhigaysa maqsuud raalina uu ku noqonayaa, waxa kale oo uu isku dayayaa inuu markasta kula tartamo.
Tusaale markaad dhar cusub soo iibsato, Amaan aad la kulanto oo lagu amaano , qof baa ku waydiinaya xageed dharka kasoo iibsatay ?markaad uga jawaabto waxa uu ka sheekeynayaa dhar cusub oo uu soo iibsaday, meeshii uu kasoo iibsaday , lacagtii uu kasoo bixiyay, waxa uu kuu sheegayaa inuu kaa dookh fiican yahay, dharkiisuna asal yahay iyo wixii lamid ah.
Kuma farxayo markaad horumar samayso; markaad war farxadleh u sheegto isla markiiba waxa uu isku dayayaa inuu farxadaada qaso isagoo kaaga nixinaya hadallo layaab leh oo kaa nixiya.
-Saaxiibtinimadu maaha isla socod oo kaliya , laakiin waa dad raad ku leh noloshaada, waa tiirkaaga nolosha, garabkaaga , markasta waxay kaalin ku leeyihiin aragtidaada iyo sidii aad bulshada uga mid noqon lahayd.
Qofkaad doonto waad iska dhigi kartaa , laakiin xaqiiqadu mar unbay iska soo ifbixi.